University College London - Kudzidza in United Kingdom, England
inotangwa : 1826
Musakanganwa kuti kurukura University College London
Kunyoresa pa University College London
UCL rakaumbwa 1826 kuvhura dzidzo yepamusorosoro muEngland vaya vainge anosiirirwa pairi - kuva yunivhesiti yokutanga muEngland kubvuma vakadzi vadzidzi pamusoro yakaenzana usakurirwe varume 1878.
Academic zvakaisvonaka uye tsvakurudzo rinotaura matambudziko chaiwo-nyika kuzivisa greek ethos kwedu nhasi uye nechepakati redu-gore 20 nzira, UCL 2034.
UCL ane yakanakisisa zvedzidzo kuti mudzidzi reshiyo muUK (1:10), kuwiriranisa kirasi diki hukuru uye kutsigirwa hunoshamisa munhu (Times 2013).
UCL ndeimwe pamusoro maviri mumayunivhesiti muUK kuti nhamba mapurofesa, izvo zvinoreva kuti vatinodzidza navo makadzidziswa zvikuru kwazvo vanonyatsokwanisa nyanzvi mumunda yavo (Yepamusoro Education Statistics Agency 2011).
UCL zvinoita kuti rinokurudzira vadzidzi kuzvikudza asi rondedzero dzokufungidzira dzinowanzoguma. mu 2013 oga, UCL vadzidzi vaiitawo 41,500 maawa chokuzvidira basa uye akamisa 80 evanhu akaitwa uye 25 mudzidzi mabhizimisi.
UCL rinoumbwa vanhu zvinoshamisa: inozvikudza mapurofesa uye asina vadzidzi; voruzhinji avimbisana nyanzvi yezvirwere wevanamakanika, uye vose mumwe zvipenga puzzle zvinoumba aitungamirira yunivhesiti.
Rorusununguko Arts & Humanities
The UCL rorusununguko Arts & Humanities ari mukurumbira muzinda changamire, apo kutsvakurudza rakanaka nyika-kutungamirira anodyisa zvakananga kunyika zvirongwa zvose kudzidza.
Vadzidzi vanobatsirwa multi-nechirango upamhi kudzidzisa munzvimbo dzakadai Chirungu, mafungiro, ChiGiriki & Ratini, ChiHebhuru & Studies vechiJudha pamwe kupfuura 20 Mitauro ano European. Mapurogiramu anowanikwa kubva siyana dzedu nzvimbo yokutsvakurudza, uye fakaroti uyewo richanzi Slade School of Fine Art, izvo anoramba hunoita kuti yainakidza hurukuro pamusoro panguva unyanzvi, munyika nepasi rese.
Tinovavarira vakwanise vadzidzi kutevera zvido zvavo zvechikoro uye kukudziridza zvose noruzivo uye pachedu.
UCL Chirungu Language & Literature
UCL Greek & Ratini
UCL School of European Languages, Culture uye Society
UCL Slade Chikoro Fine Art
The Bartlett, UCL kwakaita mano Built Environment
Isu tiri Bartlett: UCL kwakaita rorusununguko pasi pose ichavakirwa kwezvakatipoteredza. zvikamu dzedu kureba munharaunda yose kudzidza uye kutsvakurudza. somunhu mumwe nomumwe, hunozoita minda yavo. In kudyidzana, vanokurukura mhinduro itsva kudzvanya nyika nyaya. Vose, ivo vanomiririra nyika-kutungamirira, multidisciplinary fakaroti, vakabatanidzwa yakakura nomweya UCL.
Zvikoro zvedu uye zvikamu akafukidza anoranga kubva mapurani uye kuronga, kuti simba uye yose kumaodzanyemba, uye pamwe chete zvinoumba muUK kuti yakakwana uye nzira itsva mano akavaka kwezvakatipoteredza.
Tinopa zvakazara siyana zvirongwa zviri akavaka zvakatipoteredza munda, kubva Rokutenderwa kuti dhigirii, uyewo panguva MRes uye doctorate mumatunhu. Nesuwo mhanya zvakawanda zvikoro chirimo uye nheyo makosi uye kukura rokuva dzidzo purogiramu vatungamiriri yemberi ichavakirwa zvakatipoteredza ounyanzvi hwokugadzira.
The UCL Bartlett Center kuti Advanced Spatial Analysis
UCL Institute for Environmental Design uye Engineering
UCL Space nemarongerwo Laboratory
Rorusununguko Brain Sciences
The UCL rorusununguko Brain Sciences inozviita kutsvakurudza uye kudzidzisa munzvimbo nyika-kutungamirira kuti siyana Neural makwara inoshandiswa kudzora muviri mabasa (e.g. kunzwa, kuona uye kutaura) kuti cognition uye zvepfungwa, izvo kuona maitiro evanhu.
Isu vanonzi nyika vatungamiri kumafuro edu uye basa redu chinokwezva tsvimbo uye vadzidzi kubva pasi pose. The fakaroti chacho chinoumba zvikamu uvhure kunoshamisa uye vakagwinya zvakatipoteredza kudzidza uye kutsvakurudza.
UCL ndiye Europe kuti tsvakurudzo Powerhouse mu neuroscience. Tiri rakava wechipiri munyika, uye wokutanga Europe, mu neuroscience uye maitiro achishandisa Thomson Isi Kunokosha Science zviratidzi, vanopfuura kaviri nemabhuku akawanda uye anowanika papi sezvo rimwe sangano ripi neripi European. UCL Neuroscience vaongorori chamutsa pamusoro 30% munyika mupiro kuna zvikuru kwazvo yataurwa mabhuku neuroscience, kupfuura kaviri sezvo dzimwe yunivhesiti chero. In neuroimaging uye zvekuchipatara neurology, UCL unobereka 65% uye 44% anotsigira UK kuna munyika kupfuura zvikuru aripo mapepa, kashanu kuti chemhando UK tsika inotevera.
The rorusununguko Brain Sciences pamwe nokukuyeuchidzai Youpenyu Sciences, Medical Sciences uye Population Health Sciences zvinobatana kuumba School of Life & Medical Sciences. The School ndechimwe kupfuura uye kupfuura nomukurumbira aggregations renyanzvi mumunda wayo uye ane yose nomukurumbira dzidziso anoudzwa zvamakaparadza-mucheto tsvakurudzo. The SLMS Domains kunosanganisira noupamhi pakutsvakurudza basa mhiri School mukati pfumbamwe moyo groupings. tsvakurudzo iyi inoitwa pamwe nevamwe madhipatimendi UCL uye vachitsigirwa kudyidzana edu NHS nokuchengetesa, tsvakurudzo yevakuru, masangano uye indasitiri.
UCL Engineering anomurwira kutsvakurudza uye kurovedzwa mhiri zvose zvinoumba ano. Previous zvidzidzo uye basa pano zvakabudisa nokukurumidza mushonga nezvinobvamo, faibha-optic kukurukurirana uye kwezvivako Indaneti, uye tikaramba kununura nyika-achichinja zvakagadzirwa.
vadzidzi vedu uye tsvimbo vanokwezvwa kubva pasi pose, sezvo vari vedu zvedzidzo uye mabhizimisi vadyidzani. Zvirongwa zvedu kudzidzisa pfungwa panyaya kuti kuva nezvahunoita munyika yakatipoteredza, apo avo kugutsikana rinotungamirirwa nomudzimu yakanakisisa dzakawanda tsvakurudzo. Nhengo fakaroti kushandisa unyanzvi hwavo mhiri Engineering kuti zvikoro uye nzvimbo, mukati UCL, uye vakwanise nyika.
UCL nokukanganisika Engineering
UCL Chikoro Management
UCL Science, Technology, Engineering uye Public Policy
The UCL Institute of Education ari chikoro nyika-zvichitungamirira kuti dzidzo uye nemagariro nesayenzi. rakavakwa 1902, isu Pari Kanopfuura 7,000 vadzidzi uye 1,000 tsvimbo. Tiri mubasa ose kondinendi.
Mu 2016 QS kuera, takanga kutanga akaiswa munyika dzidzo nekuda rechitatu gore kumhanya, mberi Harvard, Stanford uye Melbourne. Takanga paakavapa dzamambokadzi Anniversary Prize pamusana Yepamusoro uye Humwe Dzidzo 2014-16 kuti "mupiro mutemo uye kuita dzidzo pamwe dzakawanda kuwana kumativi itsva munzanga tsvakurudzo" yedu.
Takaona vakadzidziswa kupfuura 10,000 vadzidzisi mumakore gumi apfuura uye muna January 2014, takanga kuzivikanwa Ofsted yedu 'kunoshamisa’ kwokutanga mudzidzisi vachidzidziswa ose chokuratidza mhiri chikuru, zvesekondari uye zvimwe.
In chinonyanya achangopfuura Research Assessment Exercise, -Zviviri muzvitatu mabhuku edu vakatongwa kuva pose zvinokosha uye pamusoro nechetatu vakatongwa kuva 'nyika vaitungamirira'. Zvakawanikwa yedu tsvakurudzo yepamusoro akafurira hurumende basa uye gwara munzvimbo kubvira pamakore okutanga kusvika yepamusoro uye kudzidza kumabasa. Tava kutanga akaiswa yokutsvakurudza simba mune dzidzo muUK.
Nesuwo dzidzira pakudzidza uye kutsvakurudza utano, zvepfungwa uye longitudinal zveBhaibheri, nezvimwe nzvimbo mumagariro sayenzi. matatu kuberekwa Boka zvidzidzo edu chakandibatsira zvikuru kwemakore akawanda mitemo utano, anorwira kuenzana uye vechidiki.
kwakarongwa, Pedagogy uye Assessment
Learning uye Leadership
tsika nemagariro, Communication uye Media
Psychology uye Human Development
dzidzo, Practice uye Society
UCL Mitemo nderimwe achitungamirira zvikoro zvenyika mutemo. Zvinonzi akazvipira zvakaoma, multi-nechirango uye nzira itsva kudzidza mutemo yose miganhu yacho, Kunyanya kufunga yose mashandisirwo umo mutemo unoshanda.
tsvakurudzo pamusoro-yavose sezvavakatarirwa The fakaroti inoita chipo chinokosha pakunaka kwokudzidzisa kwedu uye pokudzora vatinodzidzisa. It kunoitawo kuti kukura mutemo, nguva kuumba pamutemo tsika uye voruzhinji negwaro.
Our London garo kunopa yakanaka mukana wokuswedera pamusoro pfuma rimwe guta riri center UK kwakaita mutemo, komesi, mari uye tsika nemagariro.
The UCL rorusununguko Life Sciences inozviita tsvakurudzo nyika-kutungamirira uye kudzidzisa, iyo anosanganisa pakugona sayenzi UCL chikuru zvoutachiona uye preclinical. basa redu Kunokwezva tsvimbo uye vadzidzi pasi pose, uye pamwe chete ivo kusika kunoshamisa uye vakagwinya zvakatipoteredza vose vadzidzi nevaongorori. The fakaroti unotora weboka Biosciences, ari UCL School of Pharmacy, ari UCL MRC Laboratory nokuda Molecular Cell Biology uye Gatsby Computational Neuroscience Unit.
The rorusununguko Life Sciences pamwe mano ose Brain Sciences, Medical Sciences uye Population Health Sciences zvinobatana kuumba School of Life & Medical Sciences. The School ndechimwe kupfuura uye kupfuura nomukurumbira aggregations renyanzvi mumunda wayo uye ane yose nomukurumbira dzidziso anoudzwa zvamakaparadza-mucheto tsvakurudzo. The SLMS Domains kunosanganisira noupamhi pakutsvakurudza basa mhiri School mukati pfumbamwe moyo groupings. tsvakurudzo iyi inoitwa pamwe nevamwe madhipatimendi UCL uye vachitsigirwa kudyidzana edu NHS nokuchengetesa, tsvakurudzo yevakuru, masangano uye indasitiri.
Rorusununguko akarongeka & Physical Sciences
The rorusununguko akarongeka & Physical Sciences unosanganisira mashoko musoro, experimental uye akarongeka kudzidza zvakasikwa yedu. Kutsvakurudza Front-mutsetse anodyisa zvakananga kunyika yedu zvirongwa kudzidzisa, uye vataidzidzisa vanobatsirwa kuwana vomuzana kirasi rabhoritari zvivako. The fakaroti inopa inofa-gore matatu BSc uye kwemakore mana Master's-pamwero MSci madhigirii zvichiitika uyewo zvimwe zvetsika zvedzidzo nharaunda.
The fakaroti inopa umbowo akawanda tsvakurudzo nzvimbo. Izvi zviite zvakadzama, interdisciplinary tsvakurudzo kuburikidza kubatirapamwe pakati nyanzvi mukati fakaroti, uye anoenderana nzvimbo Engineering uye Life Sciences. The fakaroti anewo dhigirii chirongwa chacho interdepartmental pachake: Natural Sciences.
UCL Physics & asitironomi
Rorusununguko Medical Sciences
The UCL rorusununguko Medical Sciences inobatanidza UCL Medical School uye vanomwe mumapoka UCL uye Kudya, kutanga Powerhouse kutsvakurudza nesayenzi yezvokurapa uye nokudzidzisa.
Staff ari fakaroti ita tsvakurudzo nyika-vaitungamirira uye kudzidzisa munzvimbo kuti siyana zvinokonzerwa nemavhairasi oncology kune connective zvinyama chirwere uye kunanzvana utano. The fakaroti chacho chinoumba zvikamu uvhure kunoshamisa uye vakagwinya zvakatipoteredza kudzidza uye kutsvakurudza.
The rorusununguko Medical Sciences pamwe mano ose Brain Sciences, Life Sciences, uye Population Health Sciences zvinobatana kuumba School of Life & Medical Sciences. The School ndechimwe kupfuura uye kupfuura nomukurumbira aggregations renyanzvi mumunda wayo uye ane yose nomukurumbira dzidziso anoudzwa zvamakaparadza-mucheto tsvakurudzo. The SLMS Domains kunosanganisira noupamhi pakutsvakurudza basa mhiri School mukati pfumbamwe moyo groupings. tsvakurudzo iyi inoitwa pamwe nevamwe madhipatimendi UCL uye vachitsigirwa kudyidzana edu NHS nokuchengetesa, tsvakurudzo yevakuru, masangano uye indasitiri.
Rorusununguko Population Health Sciences
The UCL rorusununguko Population Health Sciences inobatanidza unyanzvi muna Child Health, Women uye Reproductive Health, Population Health, Global Health, Miedzo Clinical, Health Informatics uye zvemwoyo Science. Chinangwa charo kurwira kunoshamisa yokutsvakurudza uye kudzidzisa utano hwakanaka hwevanhu, uye kunobatanidza pfungwa kuti anoudza ayo bhezari uye basa rokudzidzisa ndiyo mararamiro.
tsvakurudzo The fakaroti wacho elucidates zvipenyu, zvounhu uye mupfungwa pezvakaitwa anoshanda munzvimbo hwomunhu upenyu, uye kuyambuka zvizvarwa, kuti sei kukura zvirwere vanhu. tsvakurudzo iyi inozivisa Rokutenderwa, dhigirii uye kudzidzisa yekosi.
The rorusununguko Population Health Sciences, pamwe mano ose Brain Sciences, Life Sciences uye Medical Sciences zvinobatana kuumba School of Life & Medical Sciences. The School ndechimwe kupfuura uye kupfuura nomukurumbira aggregations renyanzvi mumunda wayo uye ane yose nomukurumbira dzidziso anoudzwa zvamakaparadza-mucheto tsvakurudzo. The SLMS Domains kunosanganisira noupamhi pakutsvakurudza basa mhiri School mukati pfumbamwe moyo groupings. tsvakurudzo iyi inoitwa pamwe nevamwe madhipatimendi UCL uye vachitsigirwa kudyidzana edu NHS nokuchengetesa, tsvakurudzo yevakuru, masangano uye indasitiri.
UCL Social & Historical Sciences fakaroti
The UCL rorusununguko Social & Historical Sciences inomirira nharaunda zivo apo nevanhu uye sayenzi vanosangana. Zvido uye nzira mapfumbamwe chinoumba madhipatimendi kupa mikana yakanaka itsva uye pakubatsirana tsvakurudzo.
Imwe neimwe madhipatimendi ane makuru tsvakurudzo zvinokwaniswa nemumba chirango chacho. vamwe 200 mudonzvo dzinofinha inobatsira pakudzidzisa mabasa mhiri fakaroti nokutsvakurudza mabasa avo kuzadzikiswa neavo zvinenge 100 tsvakurudzo mudonzvo. The madhipatimendi inoitawo basa guru UCL kuti kukura richikurukura interdisciplinary tsvakurudzo nzvimbo.
UCL Institute of America
UCL School kwechiSlavonic & East Studies European
UCL chake chaibva pane 11 Kukadzi 1826 pasi zita London University sezvo rokunyika nzira kuna mumayunivhesiti of Oxford uye Cambridge dzechitendero. London University kwakaita wadheni wokutanga waiva Leonard Horner, uyo aiva musayendisiti wokutanga musoro yunivhesiti British.
Pasinei rinowanzogamuchirwa vanayo kuti muzivi Jeremy Bentham aiva muvambi UCL, mafambirano yake yakananga aihuitira kutenga mugove No.633, panguva mari £ 100 vanobhadharwa pfumbamwe Yakabudiswa pakati December 1826 uye January 1830. mu 1828 Akaita sarudza shamwari pachigaro kanzuru, uye 1827 akaedza kuva mudzidzi wake John Bowring vakagadzwa somutariri purofesa Chirungu kana History rokutanga, asi zvose panguva musarudzo ake akanga kubudirira. Izvi zvinoratidza kuti kunyange pfungwa ake vangave nesimba, iye wakange zvishoma kudaro. Zvisinei Bentham ari nhasi inowanzonzi aionekwa somunhu “baba zvokunamata” pamusoro UCL, sezvo ake pfungwa kukuru pamusoro dzidzo uye nzanga vaiva kurudziro kupfungwa iri havaoni, kunyanya Scotsmen James Mill (1773-1836) uye Henry Brougham (1778-1868).
mu 1827, Sachigaro Political Economy pa London University akasikwa, pamwe John Ramsay McCulloch sezvo wokutanga incumbent, kutanga imwe madhipatimendi yokutanga dzezvoupfumi muEngland. mu 1828 yunivhesiti akava wokutanga muEngland kupa Chirungu somunhu pasi uye nokudzidzisa Classics uye mushonga vakatanga. mu 1830, London University akatanga London University School, izvo vaizova University College School. mu 1833, yunivhesiti yakatarwa Alexander Maconochie, Secretary kuna Royal Geographical Society, sezvo purofesa wokutanga jogirafi muUK. mu 1834, University College Hospital (Pakutanga North London Hospital) akasvinudzwa sezvo kudzidzisa muchipatara kuyunivhesiti chikoro zvokurapa.
mu 1836, London University akanga achitaurwa nevanopinda ne Royal Charter pasi zita University College, London. Pazuva iroro, University of London akasikwa youmambo bumbiro sezvo nedhigirii-awarding anoongorora puranga kuti vadzidzi kubva vemumapato muzvikoro, pamwe University College uye waMambo College, London achiidzwa ari bumbiro sezvo Affiliates maviri okutanga.
The Slade Chikoro Fine Art rakaumbwa 1871 anotevera zvinosiyiwa kubva Felix Slade.
mu 1878 University of London kuzonzi okuwedzera bumbiro zvichiita kuti yunivhesiti yokutanga British kuti vabvumirwe mubayiro madhigirii vakadzi. Zvegore, UCL vakabvuma vakadzi kuti mano of Arts uye Mutemo uye Science, kunyange zvazvo vakadzi vairamba wakakomberedzwa kubva mano ose Engineering uye Medicine (kunze yemazuva pachena utano uye utsanana). Nepo UCL anoti kunge yunivhesiti yokutanga muEngland kubvuma vakadzi yakaenzana mashoko kuvanhu, kubva 1878, University of Bristol kunoitawo murandu uyu, ndine akabvuma vakadzi panheyo dzaro (somunhu koreji) mu 1876. Armstrong College, mumwe mugadzi nesangano Newcastle University, akabvumirawo vakadzi kupinda kubva panheyo dzaro 1871, kunyange hapana chaizvoizvo anosarudzwa kusvikira 1881. Vakadzi vakanga pakupedzisira akabvuma kuti zvidzidzo dzokurapa munguva World First Hondo 1917, kunyange hondo yapera zvausingakwanisi akaiswa pamusoro nhamba dzavo.
mu 1898, Sir William Ramsay akawana zvinhu krypton, neon uye xenon vachigere purofesa wekemisitiri pa UCL.
mu 1900 University of London akanga patsva sechinhu yeUnited yunivhesiti pamwe nemitemo itsva ndokukweverwazve kumusoro pasi University of London Act 1898. UCL, pamwe nezvimwe colleges London, akava chikoro paUniversity of London. Kunyange zvazvo dzakawanda constituent masangano zvabatwa kuzvionera yavo, UCL akanga akabatanidzwa kupinda University mu 1907 pasi University College London (chinja) chiito 1905 uye vakarasika rusununguko yaro zviri pamutemo.
1900 akaonawo chisarudzo kugadza salaried musoro pakoreji. Yokutanga incumbent aiva Carey Foster, uyo akashanda se Principal (sezvo pambiru pakutanga vanoda) kubva 1900 kuti 1904. Akanga Anotsiviwa Gregory Foster (hapana ukama), uye 1906 rokuti akazonzi Provost kunzvenga kuvhiringidzika pamwe Principal paUniversity of London. Gregory Foster akagara kutozosvikira 1929.
mu 1906 ari Cruciform Building yakavhurwa sezvo musha mutsva kuti University College Hospital.
UCL akatsigira wandei kukuvara bhomba panguva Second World War, kusanganisira kuti Great Hall uye Carey Foster Physics Laboratory. UCL magazini mudzidzi wokutanga, Pi Magazine, rakabudiswa kwenguva yokutanga pamusoro 21 Kukadzi 1946. The Institute of Jewish Studies kutamiswa UCL mu 1959. The Mullard Space Science Laboratory yakatangwa 1967. mu 1973, UCL akava wokutanga yemarudzi kubatana kusvika aizotangira Indaneti, ari ARPANET.
Kunyange zvazvo UCL aiva pakati vokutanga mumayunivhesiti kubvuma vakadzi chete okuti sezvo vanhu, mu 1878, mukuru zvakafanana mukamuri koreji wacho, ari Housman Room, vakasara vevanhu chete kusvikira 1969. Pashure maviri kundikana kuedza munhu inofamba zvakapfuudzwa yakaguma panguva iyoyo nokuda bonde panguva UCL. Izvi zvakabatsira naBrian Woledge (Fielden muzvinafundo French pa UCL kubva 1939 kuti 1971) uye David Colquhoun, panguva iyoyo duku mudzidzisi ari pharmacology.
mu 1976, mugwaro racho idzva akadzorera rusununguko UCL zviri pamutemo, kunyange vachiri pasina simba mubayiro pachake madhigirii ayo. Pasi bumbiro iri kukoreji zvakazivikanwa zviri pamutemo aizivikanwa University College London, Vakati kare pamutemo kunge “University of London, University College” kubva kwayo kukumbanidzwa University. Zita iri akasiya koma zvaishandiswa nezita raro vamba “University College, London”.
mu 1986, UCL akabatanidzwa pamwechete Institute of Archaeology. mu 1988 UCL akabatanidzwa pamwechete Institute of Laryngology & Otology, ari Institute of Orthopedics, ari Institute of Urology & Nephrology uye Middlesex Hospital Medical School.
mu 1993 mumwe azununguse paUniversity of London aireva kuti UCL (uye nezvimwe mumakoreji) akawana mbune hurumende mari uye kodzero kumupa University of London rworwendo pachavo. Izvi zvakakonzera UCL aionekwa somunhu of facto yunivhesiti yazvo kodzero.
mu 1994 Yunivhesiti College London Hospitals NHS Trust rakavambwa. UCL akabatanidzwa pamwechete College Rwokutaura Sciences uye theInstitute pamusoro Ophthalmology mu 1995, ari Institute of Child Health uye School of Podiatry mu 1996 uye Institute of Neurology mu 1997. mu 1998 UCL akabatanidzwa pamwechete Royal Free Hospital Medical School pakusika Royal Free uye University College Medical School (Yakazopiwa zita rokuti UCL Medical School muna October 2008). mu 1999 UCL akabatanidzwa pamwechete School kwechiSlavonic uye East Studies European uye Eastman Dental Institute.
The UCL Jill Dando Institute Kwemhosva Science, wokutanga yunivhesiti dhipatimendi munyika wakayeriswa zvakananga kuderedza mhosva, rakaumbwa 2001.
Vaitaura kuti batanidzo pakati UCL uye Imperial College London zvakaziviswa mu 2002. The chakanga chagumbura nokupikiswa kwakasimba kubva UCL kudzidzisa vashandi uye vadzidzi uye Aut mubatanidzwa, izvo akatsoropodza “kuti kunaka nokukasira uye kushaya kubvunzana”, zvichiita kuti ayo Kuramba kubudikidza UCL Provost Sir Derek Roberts. The Blogs chakabatsira kumisa batanidzo, zvinochengetedzeka, kunyange vamwe Links zvino yakaputsika: ona David Colquhoun kuti Blog, uye panzvimbo zvikuru Stylish Save UCL Blog, iyo dzinovangira naDavid Conway, mudzidzi akawana dhigirii iri dhipatimendi echiHebheru zvidzidzo vechiJudha.
The London Center kuti Nanotechnology yakatangwa 2003 sezvo pamwe kwavanoita pakati UCL uye Imperial College London.
kubva 2003, apo Muzvinadzidzo UCL David Latchman akava Tenzi pedyo Birkbeck, iye ndokugadzira pedyo ukama pakati izvi zviviri University of London mumakoreji, uye pachedu anorambira madhipatimendi pa vose. Joint tsvakurudzo nzvimbo zvinosanganisira UCL / Birkbeck Institute for Earth uye Planetary Sciences, ari UCL / Birkbeck / IoE Center kuti Educational Neuroscience, ari UCL / Birkbeck Institute of Structural uye Molecular Biology, uye Birkbeck-UCL Center kuti Neuroimaging.
mu 2005, UCL pakupedzisira akapiwa yayo akadzidzisa uye tsvakurudzo dhigirii awarding masimba uye zvose zvitsva vadzidzi UCL vakanyorwa kubva 2007/08 vanokodzera chete UCL madhigirii. Uyewo 2005, UCL kushandisa mutsva chepamusoro branding, pasi izvo, nezvimwe zvinhu, zita University College London chikatsiviwa nyore initialism UCL mune zvose zvekunze kukurukurirana. Mugore iroro guru idzva £ mamiriyoni 422 chivako yakavhurwa nokuda University College Hospital musi Euston Road, ari UCL Ear Institute rakavambwa uye chivako chitsva nokuti UCL School kwechiSlavonic uye East European Studies yakavhurwa.
mu 2007, ari UCL Cancer Institute yakavhurwa richangobva kuvakwa Paul O'Gorman Building. In August 2008 UCL akaumba UCL Partners, chinhu zvedzidzo utano sayenzi centre, pamwe Great Ormond Street Hospital Yevana NHS Trust, Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust, Royal Free London NHS Foundation Trust uye University College London Hospitals NHS Foundation Trust. mu 2008 UCL akasimbisa UCL School of Energy & Resources muna Adelaide, Ositireriya, ari pachikoro chimwe yunivhesiti British munyika pakutanga. The School kunobva mu enhoroondo Torrens Building muna Victoria Square yaro zvisikwa vakatevera kwakadzama pakati UCL Vice Provost Michael Worton uye South Australian Premier Mike Rann.
mu 2009, ari Yale UCL pakubatsirana rakavambwa pakati UCL, UCL Partners, Yale University, Yale School of Medicine uye Yale - New Haven Hospital. Ndicho chikuru kubatsirana munhoroondo kana kuyunivhesiti, uye ayo Kukura kwakaita dzakwidzwa yakapiwa kuna nevanhu uye sayenzi nemagariro.
In June 2011, kambani yemigodhi BHP Billiton akabvuma vape A $ 10 miriyoni kuti UCL kuti mari pakagadzwa zviviri simba Kudya - the Energy Policy Institute, vachishandisa Adelaide, uye Institute for Sustainable Resources, inobva muLondon. In November 2011 UCL yakazivisa mapurani £ 500 miriyoni mari zvayo chikuru Bloomsbury kembasi pamusoro 10 makore, uye kugadzwa itsva 23-eka kembasi pedyo Olympic Park iri Stratford kuMabvazuva Kupera London. It yakadzokororwa ayo zvirongwa kuwedzera East London uye muna December 2014 yakazivisa kuvaka kembasi UCL East chifukidzo 11 maeka uye zvinopa kuti 125,000m2 nzvimbo pamusoro Queen Elizabeth Olympic Park. UCL East achava chikamu vakaronga Olympicopolis kuti anoronga zvokuchinja Olympic Park mugomba tsika uye utsanzi nomusimboti apo UCL angazarura chikoro chacho yokugadzirwa rokutanga, muzinda experimental engineering mumwe miziyamu nezveramangwana, pamwe mupenyu nzvimbo vadzidzi.
The School of Pharmacy, University of London akabatanidzwa UCL pamusoro 1 Ndira 2012, achiva UCL School of Pharmacy mukati rorusununguko Life Sciences. In May 2012, UCL, Imperial College London uye semiconductor kambani Intel akazivisa pokugadzwa Intel pakubatsirana Research Institute for Sustainable Zvakabatana Cities, mumwe London anotsanangura Institute Research munguva yemberi mumaguta.
In August 2012 UCL akagamuchira kutsoropodzwa kuti kushambadzira ane vasingabhadharwi tsvakurudzo nzvimbo; izvozvo vakazoroorwa vakabvisa advert.
UCL uye Institute of Education vakaumba inokosha chibvumirano muna October 2012, kusanganisira co-oparesheni pakudzidzisa, tsvakurudza uye kukura London muzvikoro maitiro. In February 2014 masangano maviri ndozvadziri kubatanidza uye kwemapazi rakapedzwa muna December 2014.
In October 2013 pakaziviswa kuti Translation Studies Unit Imperial College London kuti vatamire UCL, achiva chikamu UCL School of European Languages, Culture uye Society. In December 2013, pakaziviswa kuti UCL uye zvedzidzo rokubudisa kambani Elsevier achaita batsira kusimbisa UCL Big Data Institute. In January 2015 pakaziviswa kuti UCL akanga akasarudzwa nehurumende muUK kuti mumwe nhengo shanu muvambi Alan Turing Institute (pamwechete mumayunivhesiti of Cambridge, Edinburgh, Oxford uye Warwick), chinhu akatanga hwaizogadzwa panguva British Library kusimudzira budiriro uye kushandiswa yemhando masvomhu, kombiyuta sainzi, algorithms uye Big Data.
mu 2015 UCL akasimbisa mutsva School of Management rinotarisa zvemichina, utsanzi uye Entrepreneurship, Pavanotsiva yayo Department of Management Science uye Innovation. It vakatamira One Canada Square, Canary Wharf muna May 2016.
Unoda kurukura University College London ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
University College London pamusoro Map
Photos: University College London pamutemo Facebook
University College London wongororo
Join kukurukura pamusoro University College London.